horror, kuphambene eyeqisayo eziningi, - uhlobo kakhulu yehlukene kaningi okubalwa. It kuhloswe ngokuyinhloko at nezithameli kwentsha, ngakho-ke akumangalisi ukuthi kungani eminyakeni yamuva nje ethandwa kakhudlwana intsha horror movie. Emlandweni movie kwaphuma eziningi izithombe lokhu subgenre eyaba ekugcineni kakhulu ehlelweni elithile. Omunye izici eziyinhloko umsebenzi onjalo khona umbulali ongaqondakali ehlasela namaqhawe phakathi iqembu.
Naphezu kweqiniso lokuthi isibalo esingangaleso olukhulu imidwebo uye wavunyelwa, ukuwabuka nimangale kuze kube yilolu suku. Futhi babe eside udumo imiklamo kusuka esigabeni 'wakhanyisa ngendlela engafanele "namafilimu mayelana abafundi owabona lokho abanye zenzakalo ezinyantisayo. Kulezi imisebenzi agcwele ukubulawa umxhwele inala igazi nezinye ebukekayo. Ngakho intsha ezinyantisa umzimba njalo baba nempumelelo ehhovisi ibhokisi. Miphi athandwa kakhulu? Lesi sihloko ngeke uhlu intsha engcono mayelana nezinto ezethusayo intsha - abesabekayo, igazi eshukumisayo nemicabango. Asiqale phezulu yethu 20.
"Urban Legends" (1998)
Ukukhuluma ngalokho okungcono intsha horror movie ethulwa ezweni lanamuhla cinema, akunakwenzeka kokukhumbula ifilimu "Urban Legends", okuyinto eyaba omunye enkulu ibhokisi ehhovisi hits uhlobo. Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile ine lwendaba ethakazelisayo nge umphumela ezingalindelekile, wayesengaba yokuletha ndawonye yonke ethandwa kakhulu abadlali abasha 90. Khona-ke wena umculi odumile band "30 Seconds to Mars" Jarred Ihlobo Michael Rosenbaum, ngubani yaziwa abaningi indima yakhe njengomPristi Lex Luthor ochungechungeni "Smallville" futhi kuyovela isithonjana wangempela uhlobo Daniel Harris.
Yini enye eningayenza ukukhumbula movie efakiwe inkampani intsha? Okuthusayo kule uhlobo waqala ukudubula e-80, futhi ngempela ngempumelelo. omele yisakhiwo sodumo isikhathi waziwa kakhulu njengoba Slasher - ifilimu "Burning". Ngeshwa, hhayi eye ukuthandwa efanayo ukhiphe ngonyaka ngaphambili horror ifilimu "NgoLwesihlanu ngomhla ka 13". Kodwa, naphezu kwalokhu, isithombe Kuyazuzisa ngempela ukunakwa sesibukeli.
"Ngiyazi ukuthi wenzile ngehlobo elidlule" (1997)
Thina ukuwucabangela ngokwengeziwe engcono intsha ezishaqisayo abangase babhekane nazo. Uhlu unezela yisakhiwo sodumo "Ngiyazi ukuthi wenzile ngehlobo elidlule" - kungenye movie adume kusukela 90. Yena wathwebula isiko best of "Scream", neliyoba kule phezulu. Kulesi intsha horror ifilimu has konke ukuyenga umbukeli zisuka bese ugcine ingaqiniseki kuze sincumo sokugcina. Futhi uzinake isithombe sikhunjulwe umbulali, abazingela inkampani young.
"Valentine yami Bloody" (1981)
Abaningi ajwayelekile Remake eponymous we 2009, kodwa ngingathanda ukusho original. Lena nakanjani omunye umonakalo best cinema umlando. Indaba Umdlalo sika ingumbulali eliyimfihlakalo suit umvukuzi ukuthi terrorizes idolobha elincane American ngosuku lwezithandani. Yena methodically obulala inkampani abasha izindlela eyinkimbinkimbi kakhulu. Murder yesehlakalo iyamangalisa ngisho nangemva kweminyaka eminingi kangaka. zakudala ngaphandle kwemibandela ngokuvuma uhlobo.
"Vula Engalungile" (2006)
Cishe wonke umuntu ujwayelene nalesi ifilimu emangalisayo okubangelwa i-franchise. Okwamanje, sekuvele ezikhishwe imidwebo ezingaphezu kweziyisikhombisa, kodwa yokuqala uselokhu impumelelo. Ikakhulu sibonga "Vula Engalungile" ababukeli yaphinde yaba nesithakazelo idatha uhlobo. amaqoqo Cash zazimane zinkulu, ukuze abakhiqizi baye baqaphela ukuthi kunengqondo ukutshala okukhulu amafilimu. Kusukela ngaleso sikhathi waqala inkathi entsha uhlobo, futhi "Vula Engalungile" isibe omunye isikhonkwane imisebenzi kwekhulu lama-21.
Youth ezinyantisa umzimba akudingeki ukuba elisabisayo sina. It ngempumelelo ubonisa Thriller amahlaya "Stitches". protagonist le filimu - upopayi-isiphukuphuku ozonda umsebenzi wakhe futhi yinto yokugcina emhlabeni ufuna ukuxhumana nezingane. Uma ingozi eyenzeka kuye, lapho efa. He funga revenge on izingane, futhi ubani ogodla isithembiso sakhe. Eminyakeni eyishumi nanhlanu kamuva, avuke kwabafileyo futhi iqala izindlela ezinesihluku kakhulu ukubulala ingane esikhulile abaye baba izinsizwa. Le filimu ogcwele amahlaya, abakwazisayo bonke abalandeli of black amahlaya. Nokho, zikhona yini izigcawu eziningi igazi.
"Silent Night, Deadly Ebusuku" (1984)
Mhlawumbe lena yiyona ndlela engcono horror movie ku indaba ephathwayo New Year. Ngolunye usuku, omunye kusihlwa pre-ubusika uqala ngesihluku ukubulala intsha, ababengakholelwa ukulungiselela ekugubheni Christmas. Umbulali akuyona elula, kodwa isudu Santa Claus. Futhi beka isikhwama nge zipho imbazo yakhe enkulu, okuyinto esinquma izisulu zakhe zibe izicucu. Excellent intsha horror ifilimu, okuyinto enhle ukubukwa ngamaholide ebusika.
"Uketshezi Class" (1988)
Okokuqala lokhu ifilimu intsha horror kuyinto ephawulekayo ukuthi indima yakhe yokuqala enkulu ifilimu kudlalwa-Brad Pitt. Manje inkanyezi Hollywood, kodwa ke kuphela izinyathelo kuqala ebhayisikobho. Nokho, ngisho nakuleli ifilimu ishanelwe ikhono lakhe elikhulu ukuthi ivuliwe ngokugcwele lesi sithombe esilandelayo. Le filimu likhuluma umfundi wasesikoleni esiphakeme ambalwa ngubani uyabanjwa phezulu umdlalo othile sika wezimpi ezalandela. Umuzi egcina uchungechunge zokubulala wezimpi ezalandela. wonke umuntu Suspect. Tando they be able ukubala umbulali ngaphambi ezobhekana elinye igalelo?
Remake Classic horror ifilimu omkhaya kancane amazimu ngubani ogence bonke abakhileyo idolobha elincane Texas futhi ukubamba izivakashi ngephutha waxosha indlela engafanele. "Texas Chainsaw Massacre" kuyinto ethandwayo ngokuyinhloko ngenxa Maniac esesabekayo ngelika Leatherface. Ngesizotha iphatha izivakashi abasha ngosizo Chainsaw yakhe. Le filimu ziyisibonelo esihle kakhulu zendlela yokwenza remakes ezinhle.
"Ukukhala Wolf" (2005)
I-movie enhle mayelana iqembu labafundi abaye yanquma ukudlala umdlalo ongaziwa. Konke lokhu kuholela yokuthi sebeqala ukuzingela Maniac ongaqondakali ngelika Ukukhala Wolf. Tando they be able ukubala umbulali phambi uzobulala zonke abafundi?
Ngoba bonke abalandeli uhlobo Slasher lokhu ifilimu kuyoba isibusiso sangempela. Naphezu ibhajethi nesizotha, umqondisi wakwazi ukuqoqa inikezwe ifilimu movie, mhlawumbe, azo zonke izinkanyezi enkulu uhlobo. Khona-ke wena Robert Englund ( "A Nightmare ku Elm Street") futhi Keyn Hodder ( "NgoLwesihlanu ngomhla ka 13") noTony Todd ( "Kendimen"), kanye nabanye abaningi. Uzungu kugxile iqembu zentsha sesinquma ukuhamba uhambo emfuleni ehlathini lendawo. Nokho, lapho esabalindele babonakala psycho-unyawo Crowley, owakhonza iminyaka eminingi ngifuna ukuziphindiselela abulale noma ubani ongena endaweni yawo.
"INdlu 1000 Izidumbu" (2003)
Aseqala ifilimu we umculi ethandwa Rob Zombie. Kuyinto imfihlo ukuthi kuyinto connoisseur omkhulu we uhlobo yokwesaba okukhulu. Futhi uma wonke ukuthi lokhu kuye kwabangela ifilimu, waba DEBUT ngoba Rob. Le project ihlanganisa njengoba abadlali elaziwayo elincane, kanye nezinkanyezi eziningi eminyakeni edlule, okuyinto ngaleso sikhathi lase linayo kakade isikhathi ukukhohlwa eziningi. Ikakhulukazi, Sid Heyg indima yakhe njengomPristi uCaptain Spaulding kwaba able kuze dlweza umsebenzi wakhe futhi abe isithonjana uhlobo eminyakeni embalwa kweqiniso. Le filimu ugcwele izinkomba zakudala horror amafilimu ukuthi uqiniseka ukujabulisa Ongoti uhlobo.
Yini horror ifilimu mayelana intsha inkampani Kunconywa ebukela abalandeli uhlobo? "Ihostela" - omunye umlando wezimpi ezalandela kakhulu futhi kushaqisa. Umqondisi abasha Eli Roth wakwazi adale ifilimu uhlanya ngempela ngaphansi kokuqondisa sehlelo Kventina Tarantino, okwaziyo wonke umuntu umxhwele. Uma ucabanga ukuthi "Saw" - horror ngesihluku kakhulu, khona-ke benza iphutha. Deep! Izigcawu ezinobudlova e "Ihostela" ikhombisa naturilistichno esiphezulu. Bambalwa ngaphambilini ukwazi ukwakha ezifana ifilimu wezimpi ezalandela.
Futhi omunye umsebenzi ngaphezulu Rob Zombie, zibalwa e phezulu yethu. "Halloween" kuyinto Remake sehlelo ifilimu of the gama elifanayo Dzhona Karpentera mayelana yomunye wabalingiswa ethandwa kakhulu uhlobo - Michael Myers. Nokho, kule zombie-movie ifilimu ephethwe ngemininingwane yakhona ukumambula ubunjalo villain. Cishe ngehora we ifilimu ayiswe ukukhombisa ebusheni bakhe futhi ukuphila, ngaphambi wakwazi ukubaleka esibhedlela sabagula ngengqondo. Izibukeli uzobe elinde indaba amnyama futhi okuthakazelisayo ukuthi nakanjani zikhunjulwe isikhathi eside.
"Njengoba kusenesikhathi. Kodwa akuve kwesabeka!" (2009)
Wena uthanda ukubuka horror intsha? Khona-ke sincoma le phrojekthi! The guys kusukela MTV wakwazi ukwakha emangalisayo intsha horror ifilimu emasikweni best of uhlobo. Kuyishwa ukuthi edlula nezithameli mass, njengoba yonke trilogy Kuyazuzisa ngempela ukubukeka.
"Wolf Creek" - omunye yimpumelelo kakhulu amabhayisikobho Australian kwekhulu lama-21. A abenzi isabelomali nesizotha ephethwe ukuze uthole isamba esikhulu semali ukuthi okubangelwa i franchise lonke. Kuleli qophelo kwavela kumdlalo, kanye uchungechunge ithelevishini. Nokho, kwacaca ukuthi ingxenye yokuqala impumelelo. Ngo "Wolf Pit" umsebenzi ikhamera kakhulu, okwenza bakwazi ukuba ebamba zonke ubuhle bemvelo Australia. Futhi uzinake iyona umlingisi ababedlala indima Mika Teylora. Kulezi zinsuku isikhathi sesikrini akwenza hhayi okungaka, kodwa namanje wakwazi ukwakha isithombe ekhumbulekayo ukuthi siyesabeka.
"Ntombazane Kugcine" (2015)
Le filimu ngokuyinhloko eyenzelwe Ongoti uhlobo, njengoba kukhona egcwele zonke izinhlobo zemibhalo ehlobene kanye no- amahlaya eqondwa kuphela yilabo ujwayelene zonke ezinkulu horror amafilimu 80s. I "zokugcina intombazane" izitembu owaziwa odlalwa, kodwa ngesikhathi esifanayo ifilimu kungokwasekuqaleni kakhulu.
"I Scream" (1996)
Uma sikhumbula bonke horror intsha lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa mayelana nenkampani, akunakwenzeka ukuba miss "Scream". Wes Craven, owaba yimpumelelo kakhulu umsebenzi wakhe, ngempela ngokuthi ubuciko. Mhlawumbe akukho muntu lowo usangathanda ngikubone lokhu umsebenzi. Kuyo akukho lokususa, okuyinto siyindlala for uhlobo yokwesaba okukhulu. Ngaphezu kwalokho, e-"Scream" eziningi amahlaya ezinkulu, okuyilona elisebenzayo futhi hhayi njalo kakhulu. Waba kwaphumelela kangangokuthi eyaqanjwa sequels eziningana futhi uchungechunge ithelevishini.
"A Nightmare ku Elm Street" (1984)
Enye wobuciko kusukela master of horror Wes uCraven. Freddy Krueger wakwazi okwesabisa kwezizukulwane ezimbalwa lababukeli futhi ihlala omunye izinhlamvu edume kakhulu cinema kuze kube namuhla. Ngokwezinga elikhulu kuba sokunconywa Roberta Inglunda, ababedlala indima. iqhawe lakhe siyesabeka hhayi kuphela, kodwa uyakwazi ukunikeza abanye amahlaya elikhazimulayo ukuthi ngamunye okwalandela ingxenye kuyoba ezingasho. Futhi akumelwe sikhohlwe ukuthi indima yakhe kuqala cinema kuleli ifilimu kudlalwa Dzhonni Depp.
"NgoLwesihlanu ngomhla ka 13" (1980)
Mhlawumbe omunye the best horror amafilimu naphakade. Kuyo azikho uhlamvu odumile we Jason Voorhees, Nokho, naphezu kwalokhu, lokhu lapho indaba Crystal Lake uye wama phandle, endaweni ethakazelisayo yase kakhulu futhi igazi. "NgoLwesihlanu ngomhla ka 13" uye eyaqanjwa eziningi abalingisi kanye umqondo womunye, kodwa njengoba umuntu futhi ayikwazanga beat movie.
Okuthusayo mayelana iqembu kwentsha bayokwazisa abalandeli uhlobo. Ngakho Hlala ukhululeke ujabulele best intsha horror kanye Slasher sonke isikhathi. Happy wokubuka!
Kungakanani phambili emotweni amabhethri?